Metallized Ceramic Insulators for High Voltage Feedthru China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Metallized Ceramic Insulator > Metallized Ceramic Insulators for High Voltage Feedthru
Senza ukuhlukahluka kwezitshalo ezihlukahlukene zensimbi ze-ceramic ezinemininingwane ehlukile, njenge-tube ensimbi yoceramic, indandatho ye-ceramic ensimbi, i- substrate ene-metallic ceramic njalonjalo. Lezi zinkamishi zensimbi zenziwe nge-aluminium oxide, i-zirconium oxide noma i-beryllia ceramics ngokusebenzisa ukucindezela okumile , ukufaka umjovo, noma ukucindezela okushisayo.
Singakwazi ukuqhubeka ngosayizi oyingxenye encane ukuya kumakhulu amakhulu-usayizi, t min min. ububanzi bungaba yi-1mm, ububanzi obukhulu bufinyelela ku-800mm. Ukuze sihlangabezane nezidingo ezihlukahlukene zamakhasimende, sinikeza ukhetho lwezinhlobo zensimbi ye-metalli, ejwayelekile njengezansi:
1. I- Ceramic base + iMolybdenum (Mo / Mn) metallization ................................... 2. I- Ceramic isisekelo + Mo / Mn metallization + Nickle (Ni)
3. Isisekelo seCeramic + Isiliva (Ag) sihamba ........................................ ................................... 4. I- Ceramic base + Tungsten (W) metallization + Igolide (Au) ukuphoqa
Sinikeza ngezinga elihlukile lezinga elicacile lensimbi ye-ceramic insulator uma udinga lezi zakhi ze-ceramic ukuba ziqonde kahle, lezi zakhi ze-ceramic zephini zizoqhutshwa phambili nge-lapping, ukugaya, ukufakelwa kwe-CNC ngaphambi kokukhiqizwa kwe-metalli ekukhiqizeni isayithi. Ukubekezelelana ayetholakala kungaba +/- 0,001 ngobude, +/- 0,005 kokubili ububanzi kwangaphakathi futhi yangaphandle.
● Amandla okubambisana / amandla okugaya ..... ● Izinga lokuvuza okuphansi ● Amandla aphezulu okufaka uphawu ● Amandla aphezulu kagesi ● Ukwanda okushisa okuphansi
● Ukuphikisana nokushisa ngaphandle kokugqwala ● Min. ukumelana kagesi kanye nokuqina kwe-vacuum
Okuyinhloko yokukhiqiza ukuxoxa kwengxoxo
I-Metallic Ceramic Insulator ye-Feedthru